“Kristu Simba raMwari” | Swedera Pedyo
1-3. (a) Chii chinotyisa chakaitika kuvadzidzi muGungwa reGarireya, uye Jesu akaitei? (b) Nei Jesu achinzi nenzira yakakodzera “Kristu simba raMwari”?
VADZIDZI vakatya. Vakanga vachiyambuka Gungwa reGarireya apo dutu rakavabata kamwe kamwe. Hapana mubvunzo kuti vakanga vamboona madutu mugungwa iri—pamusoro pazvo vamwe vevarume vacho vaiva varedzi vakanga vagara nebasa. * (Mateu 4:18, 19) Asi iri rakanga riri “dutu rine simba kwazvo,” uye rakakurumidza kubvongodza gungwa zvikuru. Varume ava vakashanda zvakaoma kuti vadzore igwa racho, asi dutu racho rakanga rava kuvakunda. Mafungu akanga achisimuka “akaramba achipinda mugwa” iro rakatanga kuzara mvura. Pasinei nenyonganyonga iyi, Jesu akanga akafa kurara shure kweigwa, aneta pashure pezuva rokudzidzisa mapoka evanhu. Vava kutyira upenyu hwavo, vadzidzi vakamumutsa, vachiteterera kuti: “Ishe, tiponesei, tave kuda kuparara!”—Mako 4:35-38; Mateu 8:23-25.
2 Jesu akanga asingatyi. Nechivimbo chakakwana, akatuka mhepo negungwa achiti: “Shi-i! Nyarara!” Mhepo negungwa zvakateerera pakarepo—kuvhuvhuta kwakamira, mafungu akanyangarika kukasara kwati zii, uye “kudzikama kukuru kukavapo.” Zvino kutya kukuru kwakabata vadzidzi. “Iyeyu anombova ani?” vakabvunzana kudaro vachigunun’una. Chokwadi munhu rudzii aigona kutuka mhepo negungwa sokunge ari kururamisa mwana asingateereri?—Mako 4:39-41; Mateu 8:26, 27.
3 Asi Jesu akanga asiri mumwe munhuwo zvake. Simba raJehovha rakaratidzwa kwaari uye kuburikidza naye nenzira dzinoshamisa. Muapostora Pauro akafuridzirwa aigona kutaura nezvake nenzira yakakodzera sa“Kristu simba raMwari.” (1 VaKorinde 1:24) Simba raMwari rinoratidzwa muna Jesu munzirai? Uye kushandisa kwaJesu simba kunogona kuitei paupenyu hwedu?
Simba roMwanakomana waMwari Akaberekwa Ari Mumwe Oga
4, 5. (a) Jehovha akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga simba nechiremera chei? (b) Mwanakomana uyu akashongedzerwa sei kuti aite mabasa aBaba vake okusika?
4 Funga nezvesimba iro Jesu akanga anaro asati ava munhu. Jehovha akashandisa “simba rake risingagumi” paakasika Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, uyo akazosvika pakuzivikanwa saJesu Kristu. (VaRoma 1:20; VaKorose 1:15) Pashure paizvozvo, Jehovha akapa simba guru nechiremera kuMwanakomana uyu, achimutuma kuita mabasa Ake okusika. Pamusoro poMwanakomana, Bhaibheri rinoti: “Zvinhu zvose zvakavapo naye, uye kunze kwake hapana kunyange nechinhu chimwe chakavapo.”—Johani 1:3.
5 Asi tinongonzwisisa zvishomanana ukuru hwebasa iroro. Fungidzira simba rinodiwa kusika mamiriyoni engirozi dzine simba, chadenga nemabhiriyoni acho emapoka enyeredzi, uye pasi nemarudzi akasiyana-siyana oupenyu ari pariri. Kuti aite mabasa iwayo, Mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga akanga achigona kushandisa simba guru pazvinhu zvose—mudzimu mutsvene waMwari. Mwanakomana uyu akafadzwa zvikuru nokuva Mhizha iyo Jehovha akashandisa mukusika zvimwe zvinhu zvose.—Zvirevo 8:22-31.
6. Pashure pokufa kwake pasi pano nokumutswa, Jesu akapiwa simba nechiremera chei?
6 Mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga aigona kugamuchira rimwe simba nechiremera here? Pashure pokufa kwaJesu panyika nokumutswa kwake, akati: “Ndakapiwa simba rose kudenga nepasi pano.” (Mateu 28:18) Hungu, Jesu akapiwa simba nekodzero yokuva nesimba pazvinhu zvose. Sa“Mambo wemadzimambo naShe wemadzishe,” akapiwa chiremera chokuti “aparadz[e] hurumende dzose nechiremera chose nesimba”—zvinooneka nezvisingaoneki—zvinopesana naBaba vake. (Zvakazarurwa 19:16; 1 VaKorinde 15:24-26) Mwari “haana kusiya chinhu chisiri pasi” paJesu—kureva kuti kunze kwaiye Jehovha pachake.—VaHebheru 2:8; 1 VaKorinde 15:27.
7. Nei tichigona kuva nechokwadi chokuti Jesu haazomboshandisi zvisina kufanira simba iro Jehovha akaisa mumaoko ake?
7 Tinofanira kunetseka here kuti Jesu angangoshandisa zvisina kufanira simba rake? Kwete! Jesu anoda Baba vake zvechokwadi uye haazomboiti chero chinhu chisingavafadzi. (Johani 8:29; 14:31) Jesu anonyatsoziva kuti Jehovha haamboshandisi zvisina kufanira simba rake rose. Jesu akazvionera kuti Jehovha anotsvaka mikana yo“kuti aratidze simba rake kuna iye une mwoyo wakarurama kwazvo kwaari.” (2 Makoronike 16:9) Zvechokwadi, Jesu anoda vanhu sezvinoita Baba vake, naizvozvo tinogona kuva nechivimbo chokuti Jesu nguva dzose achashandisa simba rake mune zvakanaka. (Johani 13:1) Jesu anotozivikanwa kuti haana mhaka panhau iyi. Ngatimbokurukura simba raakanga anaro paakanga ari pasi pano uye kuti akanzwa achida kurishandisa sei.
“Ane Simba . . . Mushoko”
8. Zvichitevera kuzodzwa kwake, Jesu akapiwa simba rokuitei, uye akashandisa sei simba rake?
8 Sezviri pachena, Jesu haana kuita zvishamiso paakanga ari mukomana achikura muNazareta. Asi izvozvo zvakachinja pashure pokubhabhatidzwa kwake muna 29 C.E., paakanga ava nemakore anenge 30. (Ruka 3:21-23) Bhaibheri rinotiudza kuti: “Mwari akamuzodza . . . nomudzimu mutsvene nesimba, uye akapota nomunyika iyoyo yose achiita zvakanaka uye achiporesa vose vakanga vakadzvinyirirwa naDhiyabhorosi.” (Mabasa 10:38) “Achiita zvakanaka”—izvozvo hazviratidzi here kuti Jesu akashandisa simba rake zvakanaka? Pashure pokuzodzwa kwake, “akava muprofita ane simba mubasa nomushoko.”—Ruka 24:19.
9-11. (a) Jesu ainyanya kudzidzisira kupi, uye chinetso chei chaakatarisana nacho? (b) Nei mapoka akashamiswa nemadzidzisiro aJesu?
9 Jesu akanga ane simba mushoko sei? Aiwanzodzidzisa ari pamhene—mumahombekombe egungwa uye mujinga memakomo pamwe nomumigwagwa uye mumisika. (Mako 6:53-56; Ruka 5:1-3; 13:26) Vateereri vake vaigona kungosimuka vachienda kudai mashoko ake akanga asingavanakidzi. Munguva apo mabhuku akanga asati atanga kudhindwa, vateereri vaitofanira kutakura mashoko ake mupfungwa dzavo nomumwoyo. Naizvozvo kudzidzisa kwaJesu kwaifanira kuva kunofadza chaizvo, kunonzwisiswa nyore, uye kunoyeukwa nyore. Asi izvi hazvina kumbonetsa Jesu. Somuenzaniso, funga nezveMharidzo yake yepaGomo.
10 Mamwe mangwanani nechokwokutanga kwegore ra31 C.E., boka rakaungana nechomujinga megomo pedyo neGungwa reGarireya. Vamwe vakanga vabva Judhiya neJerusarema, kure nemakiromita 100 kusvika ku110. Vamwe vakanga vabva kunharaunda iri pedyo negungwa yeTire neSidhoni nechokumusoro. Vanhu vazhinji vairwara vakaswedera pedyo naJesu kuti vamubate, uye akavaporesa vose. Apo painge pasisina chero munhu mumwe aiva achirwara zvakakomba pakati pavo, akatanga kudzidzisa. (Ruka 6:17-19) Paakazopedza kudzidzisa pashure pechinguva, vakashamiswa nezvavaiva vanzwa. Nei?
11 Papera makore, mumwe akanga anzwa mharidzo iyoyo akanyora kuti: “Mapoka evanhu akashamiswa nemadzidzisire ake; nokuti akanga achivadzidzisa somunhu ane simba.” (Mateu 7:28, 29) Jesu akataura nesimba ravaigona kunzwa. Akataura akamiririra Mwari uye akatsigira kudzidzisa kwake nechiremera cheShoko raMwari. (Johani 7:16) Mashoko aJesu akanga akajeka, kurudziro yake yainyengetedza, uye pfungwa dzake dzakanga dzisingarambiki. Mashoko ake aisvika pamwoyo penhau pamwe chete nepamwoyo yevateereri vake. Akavadzidzisa nzira yokuwana nayo mufaro, nzira yokunyengetera nayo, nzira yokutsvaka nayo Umambo hwaMwari, uye nzira yokuwana nayo nguva yemberi yakanaka. (Mateu 5:3–7:27) Mashoko ake akamutsa mwoyo yevaiva nenzara yechokwadi nokururama. Vanhu vakadaro vakanga vachida ‘kuzviramba’ vosiya zvinhu zvose kuti vamutevere. (Mateu 16:24; Ruka 5:10, 11) Uhwu uchapupu hukuru chaizvo hwesimba remashoko aJesu!
12, 13. Jesu aiva ne“simba mubasa” mupfungwai, uye zvishamiso zvake zvakanga zvakasiyana-siyana sei?
12 Jesu akanga anewo “simba mubasa.” (Ruka 24:19) MuEvhangeri munotaurwa zvishamiso zvinopfuura 30 zvaakaita iye—zvose mu“simba raJehovha.” * (Ruka 5:17) Zvishamiso zvaJesu zvakachinja upenyu hwezviuru zvevanhu. Zvishamiso zviviri bedzi—kupiwa zvokudya kwevarume 5 000 uye gare gare varume 4 000, “vakadzi nevana vaduku vasingabatanidzwi”—zvaibatanidza mapoka pamwe evanhu 20 000!—Mateu 14:13-21; 15:32-38.
“Vakaona Jesu achifamba pamusoro pegungwa”
13 Zvishamiso zvaJesu zvakanga zvakasiyana-siyana. Aiva nechiremera pamadhimoni, achingoadzinga nyore nyore. (Ruka 9:37-43) Aiva nesimba pazvinhu zvakasikwa naMwari, achishandura mvura kuva waini. (Johani 2:1-11) Zvakashamisa vadzidzi vake, akafamba pamusoro peGungwa reGarireya rakanga richivhuvhutwa nemhepo. (Johani 6:18, 19) Aiva nesimba pazvirwere, achirapa nhengo dzomuviri dzakaremara, kurwara kwenguva refu, uye kurwara kunouraya. (Mako 3:1-5; Johani 4:46-54) Kuporesa kwacho akakuita munzira dzakasiyana-siyana. Pane munhu mumwe waakaporesa ari kure, asi vamwe vakatoita zvokubatwa naJesu chaiko. (Mateu 8:2, 3, 5-13) Vamwe vakaporeswa pakarepo, vamwe zvishoma nezvishoma.—Mako 8:22-25; Ruka 8:43, 44.
14. Mumamiriroi ezvinhu umo Jesu akaratidza kuti aiva nesimba rokukunda rufu?
14 Zvisina mumwe aizvigona, Jesu aiva nesimba rokumutsa vakafa. Muzviitiko zvitatu zvakanyorwa, akamutsa vakafa, achidzosa mwanasikana wemakore 12 kuvabereki vake, mwana aiva mumwe bedzi kuna amai vake vaiva chirikadzi, uye hanzvadzikomana yaidiwa zvikuru kuhanzvadzi dzayo. (Ruka 7:11-15; 8:49-56; Johani 11:38-44) Hapana mamiriro ezvinhu akakunda simba rokudzorera raJesu. Akamutsa musikana aiva nemakore 12 panhovo yorufu achangobva kufa. Akamutsa mwanakomana wechirikadzi aiva pahwanyanza, sezviri pachena musi wacho waakafa. Uye akamutsa Razaro kubva muhwiro pashure pemazuva mana afa.
Kushandisa Simba Nenzira Isina Udyire, Yokunzwisisa, uye Yokufunga Vamwe
15, 16. Uchapupu hwei huripo hwokuti Jesu akanga asina udyire pakushandisa simba rake?
15 Ungafungidzira here kuti simba raizoshandiswa zvisizvo sei kudai simba raJesu raizoiswa mumaoko omutongi asina kukwana? Asi Jesu akanga asina chivi. (1 Petro 2:22) Akaramba kusvibiswa noudyire, undingoveni, uye kukara izvo zvinosunda vanhu vasina kukwana kushandisa simba ravo kukuvadza vamwe.
16 Jesu akanga asingashandisi simba rake nenzira youdyire, asingamborishandisi kuti zvimunakire iye. Paakanga ane nzara, akaramba kuzvishandurira matombo kuti ave chingwa. (Mateu 4:1-4) Zvinhu zvake zvishomanana zvaaiva nazvo zvaiva uchapupu hwokuti aisazvipfumisa nokushandisa simba rake. (Mateu 8:20) Kune humwe uchapupu hwokuti mabasa ake esimba akanga asingaitwi nemhaka youdyire. Paaiita zvishamiso, aiita kudaro achitorasikirwa iye. Paaiporesa vairwara, simba raibuda maari. Kubuda kwesimba uku aikunzwa, kunyange pakuporesa kumwe chete. (Mako 5:25-34) Asi akabvumira mapoka makuru evanhu kumubata, uye vakaporeswa. (Ruka 6:19) Ipfungwa yokusazvifunga yakazonaka!
17. Jesu akaratidza sei kuti aishandisa simba rake nokunzwisisa?
17 Jesu airatidza kunzwisisa pakushandisa simba rake. Haana kumboita mabasa esimba kungoti aonekwe kana kuratidzwa kwesimba kwokushamisira kusina chinangwa. (Mateu 4:5-7) Akaramba kuita zviratidzo nokuda bedzi kwokuti agutse Herodhi aida kuziva nemhaka yechinangwa chisina kunaka. (Ruka 23:8, 9) Pane kushambadzira simba rake, Jesu aitowanzorayira vaaiporesa kusaudza chero munhu. (Mako 5:43; 7:36) Aisada kuti vanhu vasvike pakuziva nezvake norunyerekupe.—Mateu 12:15-19.
18-20. (a) Chii chakaita kuti Jesu ashandise simba rake sezvaakaita? (b) Unonzwa sei pamusoro penzira iyo Jesu akaporesa nayo mumwe murume aiva matsi?
18 Murume ane simba uyu, Jesu, akanga akasiyana zvikuru nevatongi ivavo vakashandisa simba nenzira youtsinye isinei nezvinodiwa uye kutambura kwevamwe. Jesu aiva nehanya nevanhu. Kungoona vaitambura kwaimutambudza zvikuru zvokuti akanzwa achida kuvasunungura pakutambura kwavo. (Mateu 14:14) Akafunga nezvemanzwire avo nezvavaida, uye kurangarira kwounyoro uku ndiko kwakaita kuti ashandise simba rake sezvaakaita. Muenzaniso unosvika pamwoyo unowanikwa pana Mako 7:31-37.
19 Panhambo iyi, mapoka makuru akawana Jesu akamuunzira vazhinji vairwara, uye akavaporesa vose. (Mateu 15:29, 30) Asi Jesu akaenda parutivi nomumwe murume kuti amuitire zvaaida zvakasiyana nezvevamwe. Murume wacho akanga ari matsi uye asingagoni nokutaura kwose. Jesu angave akaona kutya kwomurume uyu kana kuti kunyara. Afungisisa, Jesu akaenda nomurume wacho parutivi—kure neboka racho—kunzvimbo yepachivande. Ipapo Jesu akashandisa zviratidzo kuratidza murume wacho zvaakanga ava kuda kuita. “Akaisa minwe yake munzeve dzomurume wacho uye, akati apfira mate, akabata rurimi rwake.” * (Mako 7:33) Apedza kudaro Jesu akatarira kudenga akatura befu achinyengetera nechomumwoyo. Zviito izvi zvaizoratidza murume wacho kuti, ‘Zvandava kuda kukuitira imhaka yesimba rinobva kuna Mwari.’ Pakupedzisira, Jesu akazoti: “Dziuka.” (Mako 7:34) Zvadaro murume uya akatangazve kunzwa, uye akakwanisa kutaura sevamwe.
20 Zvinosvika pamwoyo sei kufunga kuti kunyange paaishandisa simba rake raakapiwa naMwari kuporesa vairwara, Jesu akaratidza kunzwira tsitsi nokuda kwemanzwire avo! Hazvikurudziri here kuziva kuti Jehovha akaisa Umambo hwaMesiya mumaoko oMutongi ane hanya neanonzwisisa zvakadaro?
Chiratidzo Chezvinhu Zvichauya
21, 22. (a) Zvishamiso zvaJesu zvairatidzei chiri mberi? (b) Nemhaka yokuti Jesu ane simba rokudzora masimba akasikwa akadaro, chii chatingatarisira mukutonga kwake kwoUmambo?
21 Mabasa esimba ayo Jesu akaita pasi pano aingova zviratidzo zvezvikomborero zvakatokura zvichauya mukutonga kwake samambo. Munyika itsva yaMwari, Jesu achaitazve zvishamiso—asi munyika yose! Funga nezvezvimwe zvinhu zvinofadza zviri mberi.
22 Jesu achagadzirisa ukama hwezvinhu zvipenyu zvose pasi pano. Yeuka kuti akaratidza kuti ane simba rokudzora masimba akasikwa akadaro nokunyaradza dutu. Saka zvechokwadi mukutonga kwaKristu kwoUmambo, vanhu havazombofaniri kutya kukuvadzwa nemadutu, kudengenyeka kwenyika, kuputika kwemakomo, kana kuti dzimwe ngozi dzinongoitika. Sezvo Jesu ari iye Mhizha iyo Jehovha akashandisa kusika nyika noupenyu hwose huri mairi, anonyatsonzwisisa zvakaita nyika. Anoziva nzira yokushandisa nayo zvinhu zvayo nenzira yakakodzera. Mukutonga kwake, pasi rino rose richashandurwa kuva Paradhiso.—Ruka 23:43.
23. Ava Mambo, Jesu achagutsa sei zvinodiwa nevanhu?
23 Zvakadini nezvinodiwa nevanhu? Kukwanisa kwaJesu kupa vane zviuru zvokudya zvakawanda, achishandisa zvishomanana bedzi, kunotipa chivimbo chokuti kutonga kwake kuchaunza rusununguko panzara. Zvechokwadi, zvokudya zvakawanda zvichagovaniswa zvakarurama, zvichagumisa nzara nokusingaperi. (Pisarema 72:16) Kukunda kwake urwere nehosha kunotiratidza kuti vanhu vanorwara, mapofu, matsi, vakaremara, uye vanokamhina vachaporeswa—zvakakwana uye zvachose. (Isaya 33:24; 35:5, 6) Kukwanisa kwake kumutsa vakafa kunoratidza kuti simba rake saMambo wokudenga rinobatanidza simba rokumutsa mamiriyoni asingaverengeki ayo Baba vake vanofara kuyeuka.—Johani 5:28, 29.
24. Sezvatinofunga nezvesimba raJesu, chii chatinofanira kuramba tichiyeuka, uye nei?
24 Sezvatinofungisisa pamusoro pesimba raJesu, ngatirambe tichiyeuka kuti Mwanakomana uyu anotevedzera Baba vake zvakakwana. (Johani 14:9) Kushandisa kwaJesu simba nokudaro kunotiratidza zvakajeka nzira iyo Jehovha anoshandisa nayo simba. Somuenzaniso, funga nezvenzira younyoro iyo Jesu akaporesa nayo mumwe aiva nemaperembudzi. Amunzwira tsitsi, Jesu akabata murume wacho akati: “Ndinoda.” (Mako 1:40-42) Kuburikidza nenhoroondo dzakadai seiyi, Jehovha naizvozvo ari kuti, ‘Iyi ndiyo nzira yandinoshandisa nayo simba rangu!’ Haunzwi kuda kurumbidza Mwari wedu wemasimba ose here nokumuonga kuti anoshandisa simba nenzira yorudo zvakadaro?
^ ndima 1 Madutu ekamwe kamwe anogaroitika muGungwa reGarireya. Nemhaka yokuderera kwegungwa racho (anenge mamita 200 kudzikira kupfuura avhareji yegungwa), mhepo iri imomo inopisa kupfuura dzimwe nzvimbo dzakapoteredza, uye izvi zvinoita kuti mhepo isagadzikana. Mhepo ine simba inomhanya nomuMupata weJodhani kubva muGomo reHemoni, riri nechokumusoro. Kudzikama kweimwe nguva kungateverwa nedutu guru munguva pfupi.
^ ndima 12 Mukuwedzera, mabhuku eEvhangeri dzimwe nguva anobatanidza zvishamiso zvizhinji ongozvirondedzera zvose sechinhu chimwe. Somuenzaniso, pane imwe nguva “guta rose” rakauya kuzomuona, uye akarapa vairwara “vakawanda.”—Mako 1:32-34.
^ ndima 19 Kupfira mate yaiva nzira kana kuti chiratidzo chokurapa chaigamuchirwa nevaJudha pamwe neveMamwe Marudzi, uye kushandisa mate mukurapa kunotaurwa mumabhuku avanarabhi. Jesu angave akapfira kungoti aratidze murume wacho kuti akanga ava kuda kuporeswa. Chero zvazvingava, Jesu akanga asiri kushandisa mate ake sechinhu chokurapisa.
Isaya 11:1-5 Jesu anoratidza sei ‘mudzimu wesimba,’ uye tinogona kuva nechivimbo chei mukutonga kwake?
Mako 2:1-12 Kuporesa nenzira inoshamisa kwaJesu kunoratidza kuti akapiwa chiremera chei?
Johani 6:25-27 Kunyange zvazvo Jesu akagutsa vanhu pane zvavaida zvenyama, ndechipi chakanga chiri chinhu chikuru paushumiri hwake?
Johani 12:37-43 Nei zvimwe zvapupu zvakaona zvishamiso zvaJesu zvisina kumutenda, uye tingadzidzei pane izvi?
Nei tiine chivimbo chokuti Mambo akazodzwa naMwari ava pedyo nokuita kuti kuda kwaMwari kunyatsoitwa panyika?